यात्रुले सास्ती खेप्दा डिभिजन सडक कार्यालयलाई छैन वास्ता | Radio Langtang 90.3 Mhz
नेपाल–चीन–भारतलाई जोड्ने छोटो दुरीको सडक विस्तारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा यात्रुहरुले सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । नुवाकोटमा हाल नुवाकोट र रसुवालाई राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्ने र त्रिदेशीय मार्गसमेत गरि नुवाकोटका तीन वटै सडक एक साथ सुधारको काम भइरहेकोे छ ।
सडक सुधारका क्रममा ठेकेदारको लापरवाहीको कारण तीन वटै सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको यात्रुहरुको गुनासो रहेको छ । पासाङल्हामु मार्गको बेलकोटदेखि रानीपौवासम्मको सडक पूरै हिलाम्मे भएका कारण गाडीहरु घण्टौसम्म एकै ठाउँमा फसेर बस्ने गरेको यात्रु वासुदेव कडुवालले वताउनुभयो ।
वर्षात्को समयमा माथिबाट ठाउँठाउँमा पहिरोसमेत गइरहेकाले कतिखेर पहिरो खस्ने हो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. १० का केशव कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले सडक जोखिमपूर्ण बनेपछि काठमाडौंदेखि त्रिशूलीसम्मको यात्रा गर्न दिनभरको समय लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उता त्रिदेशीय मार्गका रुपमा रहेको गल्छी–देवीघाट–स्याप्रुवेशी सडकमार्गको देवीघाट– गल्छी सडक पनि सुधार भइरहेको छ । सडक सुधारको लागि सञ्चालनमा आएका उपकरणहरुले दिनको समयमा काम गर्दा यो सडक पनि घण्टौसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र एकैपटक ६ घण्टासम्म जाममा वस्नु परेको यात्रु सुमिन्द्रा रानाले गुनासो गरिन् ।
धादिङको नौविसेदेखि काठमाडौं कलंकीसम्म हुने जामका कारण यो सडकको यात्रा गर्दा पनि दिनभर लाग्ने गरेको गुनासो यात्रुहरुको रहेको छ । उता, छोटो दुरीको रुपमा चिनिने टहरे टोखा सडक पनि हिलाम्मे भएको छ । हिलोका कारण यो सडकमा पनि सवारी साधनहरु घण्टौसम्म अड्किएर बस्ने गरेको छ । हिउँदको समयमा एक घण्टामा टोखादेखि छहरेसम्म पुग्न सकिने यो सडकमा अहिले कम्तिमा तीन घण्टा लाग्ने गरेको स्थानीय हरिराम भेटवालले बताउनुभयो ।
काठमाडौंको टोखादेखि झोर, जगातसम्म दिनहुँ हिलोमा गाडी फस्ने गरेकाले दिनभरको समय गाडी निकाल्दैमा खर्च हुने गरेको यात्रुहरुको गुनासो रहेको छ । विदुर नगरपालिकाको गंगटेहुँदै थानसिंको छहरेसम्म पनि सडक मर्मतको काम भइरहेकाले हिलाम्मे भएको लिखुका स्थानीय क्षितिज थापामगरले बताउनुभयो ।
डाँडागाउँ बासीले उपभोग गर्ने मुहानको पानी दूषित
लाईन काट्न तुरुन्तै आउने, बिग्रेपछि बनाउन आउन पर्दैन हाकिमसाप ?
चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’ बाट चर्चित र लोकप्रिय बनेका कलाकार हुन् बिपिन कार्की । चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’मा अभिनय गर्नुपूर्व उनी धार परिवर्तन गरेको ...
तनहुँ२ मंसिर, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित गरी तनहुँको भानु १० नेपाल डाँडामा प्रेसर कुकुर वम प्रहार भएको ...
रसुवामा रु. २८ करोड राहत वितरण
१४ भदौ-जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले गत आवदेखि अहिलेसम्म भए गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालका अनुसार भूकम्पपछिको विपद् ...